Tsisy Trano Nipetrahana Aho: Tsy Nidoroka sy Tsy Nahery Setra Intsony
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Catalan Cebuano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Pangasinan Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Télougou Vietnamianina Xhosa
“Tsisy Trano Nipetrahana Aho”
Notantarain’i Antonio Jiménez
Fiainany Taloha: Mpidoroka zava-mahadomelina sy mpiboboka toaka ary nahery setra be
Ela be ny olona sasany vao miana-javatra amin’izay nanjo azy teo amin’ny fiainany. Hoatran’izany aho. Tao Barcelone, tanàna faharoa lehibe indrindra eto Espaina, aho no teraka sy nihalehibe. Tao Somorrostro, faritra amoron-dranomasina, izahay no nipetraka. Nalaza ratsy i Somorrostro satria nanjaka tao ny herisetra sy ny fivarotana zava-mahadomelina.
Sivy mianadahy izahay no zanak’i Dada sy Neny, ary izaho no lahimatoa. Nahantra be izahay, ka nasain’i Dada niasa aho, tamin’izaho vao folo taona monja. Mpitsimpona baolina tao amin’ny fikambanana mpilalao tenisy no asako. Niasa adiny folo isan’andro aho. Tsy afaka nandeha nianatra hoatran’ny ankizy nitovy taona tamiko àry aho. Niova asa indray aho tamin’izaho 14 taona, ka lasa nikojakoja milina tao amin’ny toerana fanefena vy.
Tany Afrika Avaratra tamin’ny 1975, tamin’izaho anisan’ny miaramila espaniola tany ivelan’i Espaina
Voantso hanao miaramila aho tamin’ny 1975, satria tsy maintsy nanao miaramila daholo ny tovolahy rehetra tamin’izany. Te hanandrana zava-baovao aho, ka nilatsaka an-tsitrapo ho anisan’ny miaramila espaniola any ivelan’i Espaina. Lasa tany Melilla, tanàna nofehezin’i Espaina any Afrika Avaratra, aho. Tamin’izany aho no lasa mpidoroka zava-mahadomelina sy mpiboboka toaka.
Rehefa tsy miaramila intsony aho, dia niverina tao Barcelone, ary namorona andian-jiolahy. Nangalarinay daholo izay hitanay. Namidinay avy eo ilay izy, dia nividiananay zava-mahadomelina ny vola azonay. Nidoroka zava-mahadomelina isan-karazany aho, ary lasa naloto fitondran-tena sy mpisotro ary mpiloka. Lasa nihanahery setra koa aho. Nisy antsy sy famaky na antsibe foana teny amiko, ary tsy natahotra mihitsy aho nampiasa an’ilay izy raha nilaina.
Indray mandeha dia nangalatra fiara izahay sy ireo namako ka nenjehin’ny polisy. Hoatran’ny amin’ny filma ireny mihitsy tamin’izay. Nentinay ilay fiara, ary efa nandeha 30 kilaometatra teo ho eo izahay no nanomboka nitifitra anay ny polisy. Farany, nidona ilay fiara nentinay ka nitsoaka daholo izahay. Rehefa fantatr’i Dada ny zavatra nataoko, dia noroahiny tsy ho an-trano intsony aho.
Tsisy trano nipetrahana aho nandritra ny dimy taona. Natory teny am-baravaran’ny tranon’olona aho, tao anaty kamiao, teny amin’ny zaridainam-panjakana, ary teny amin’ny tokotanim-pasana. Nisy fotoana koa aza aho nipetraka tao anaty lava-bato. Tsisy dikany mihitsy ny fiainako, ka nieritreritra aho hoe tsy maninona na maty aza. Tadidiko fa rehefa avy nidoroka zava-mahadomelina aho, dia nodidididiako ny tanako. Mbola eo ilay holatra hatramin’izao.
Tamin’izaho 28 taona, dia notadiavin’i Neny ary nasainy niverina tao an-trano. Nanaiky aho, ary nilaza taminy fa hiova amin’izay. Elaela anefa aho vao tena niova.
Nisy Vavolombelon’i Jehovah anankiroa tonga nitory tao aminay, indray tolakandro izay. Nihaino azy ireo aho, fa i Dada kosa nitabataba avy tao an-trano niteny tamiko hoe: ‘Roahy any ireo!’ Tsy tiako anefa izany baikobaikoina izany. Tsy noraharahaiko àry ny tenin’i Dada, fa mbola nihaino an’ireo mpitory ihany aho. Nanome ahy boky kely anankitelo ry zareo, ary faly aho nandray an’ilay izy. Nanontaniako koa ry zareo hoe aiza ny toeram-pivoriany, ary tonga tany amin’ny Efitrano Fanjakana aho afaka andro vitsivitsy.
Ny zavatra hitako voalohany dia hoe niakanjo tsara daholo ny olona rehetra tao. Izaho anefa lava volo, ny volombavako nisavoritaka, ary ratsiratsy kely ny akanjoko. Tena tsy mendrika ny hiditra tao àry aho, ka nijanona teo ivelany. Gaga anefa aho fa hitako tao ny namako anankiray izay niara-naditra tamiko taloha sady anisan’ny andian-jiolahy. Juan no anarany, ary nanao kompile izy. Fantatro tatỳ aoriana hoe lasa Vavolombelon’i Jehovah izy herintaona talohan’izay. Sahy niditra àry aho, ary nanatrika an’ilay fivoriana. Tamin’izay aho no nanomboka niova.
Nanaiky hianatra Baiboly aho, ary tsy ela dia tsapako hoe nila niova aho raha tiako ny hankasitrahan’Andriamanitra. Tsy mora tamiko ny niova satria izaho nahery setra be sy naloto fitondran-tena. Nianarako anefa fa nilaiko ny ‘niova ka nanavao ny saiko.’ (Romanina 12:2) Tena nanohina ny foko ny hoe mamindra fo Andriamanitra. Fantatro fa tiany hiova tanteraka aho, na dia nahavita zava-dratsy be dia be aza. Nanohina lalina ny foko ny zavatra nianarako momba an’i Jehovah Andriamanitra, ka tsapako fa tia ahy ilay Mpamorona.—1 Petera 5:6, 7.
Nandrisika ahy hiova izany. Momba ny fifohana sigara, ohatra, ny fianarako Baiboly indray mandeha. Dia nieritreritra aho hoe: ‘Raha tian’i Jehovah Andriamanitra hadio amin’ny lafiny rehetra aho, dia hariako any ireto sigara ireto!’ (2 Korintianina 7:1) Dia nariako teo no ho eo tokoa ilay izy.
Tsy maintsy najanoko koa ny fidorohana sy fivarotana zava-mahadomelina. Elaela vao vitako izany. Fantatro fa tsy tokony hiaraka intsony tamin’ireo namako taloha àry aho. Tsy nanampy ahy hiova mantsy ry zareo. Lasa niantehitra bebe kokoa tamin’Andriamanitra sy tamin’ireo namako Vavolombelona anefa aho, rehefa nandeha ny fotoana. Tena tia sy niahy ahy ry zareo, ary mbola tsisy nanao hoatran’izany tamiko mihitsy taloha. Ela ny ela ka afaka tanteraka tamin’ny zava-mahadomelina aho, ary nahavita ‘nitafy ny toetra vaovao.’ (Efesianina 4:24) Natao batisa àry aho tamin’ny Aogositra 1985, ary lasa Vavolombelon’i Jehovah.
Tena nihatsara ny fiainako, noho izaho nianatra Baiboly. Efa saika potika tanteraka mantsy ny fiainako taloha. Nisy 30 mahery ny namako taloha maty tanora, satria matin’ny SIDA na maty vokatry ny fidorohana zava-mahadomelina. Tsy hoatran’izany kosa no niafarako, noho izaho nanaraka ny toro lalan’ny Baiboly.
Tsy mitondra antsy sy famaky intsony aho, fa mitondra Baiboly kosa rehefa mitory. Zavatra tsy noeritreretiko mihitsy ny hoe ho lasa mpitory aho indray andro any. Mpitory manontolo andro izao izaho sy ny vadiko.
Tsy lasa Vavolombelon’i Jehovah mihitsy i Dada sy Neny. Hitan-dry zareo anefa hoe tena nahasoa ahy ny nianatra Baiboly. Niaro ny Vavolombelona teo anatrehan’ny mpiara-miasa taminy rehetra mihitsy aza i Dada. Hitany hoe ny fivavahako no nahatonga ahy hiova be. Matetika koa i Neny no niteny hoe tokony ho efa taloha be, hono, izaho no nianatra Baiboly. Marina mihitsy ny teniny.
Hitako tamin’ny fiainako taloha fa tena hadalana ny mieritreritra hoe mahasambatra ny zava-mahadomelina sy zava-dratsy hafa. Izao aho vao tena sambatra satria mampianatra ny Tenin’Andriamanitra. Io mantsy no tena nanavotra ahy.